မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: 04/01/2013 - 05/01/2013
2012 Best Korean Drama Lists - Part2(Based on my liking)
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာနှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်… သင်္ကြန်တွင်းမဗေဒါတော့ တိုပါရိုးတစ်ခုပဲရောက်တယ်… မနက် ၉နာရီခွဲလောက်ရောက်သွားတာတောင် နောက်ကျပြီး လူတွေအတော်တိုးနေရတယ်… အဲဒါနဲ့ပတ်သတ်ပြီး မဗေဒါရဲ့အကြံပြုချင်တာလေးတွေရှိသေးတယ်... ဖေ့ဘွတ်ပေါ်မှာ သရုပ်ပျက်ပုံတွေဒီနှစ်သိပ်မရှယ်ကြတော့ သိပ်ကျက်သရေရှိတာပဲ… လုပ်တဲ့သူက အစကတည်းက သူ့သိက္ခာသူ ဂရုမစိုက်လို့လုပ်ပြနေတာ သွားပြောပြီး ရှယ်နေလဲ သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲ popular ဖြစ်ရဖြစ်ရဆိုတာကို ကိုယ်ကအားပေးသလိုဖြစ်သွားမှာပေါ့… ဒါတွေထားပါတော့လေ… ခုအဓိကပိုစ့်ကတော့ ၂၀၁၂ရဲ့ မဗေဒါကြိုက်တဲ့ ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲ နောက်၃ကားကို ဆက်ရေးဖို့ပါ… ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ပတ်က သူများတွေသင်္ကြန်ပျော်နေတဲ့အချိန် မဗေဒါကတော့ Quiz2ခုရယ် Assignment ၁ခုရယ်နဲ့ ခေါင်းစားရင်း အလုပ်တွေကများ၊ ပြီးတော့ အလုပ်ကလဲ ခုဆို Blogspot ကြီးကို ဘလောက်လိုက်တော့ အရင်လို ဘလော့ရေးလို့ရတော့ဘူး… ခုတော့ MS Office နဲ့ပဲ ရေးနေရတယ်… စပြီနော်… ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းတော်တော်များများကတော့ wiki မှာရေးထားတာကို မှီငြမ်းဘာသာပြန်ထားတာပါ။ 2012 Best Korean Drama list ပထမပိုစ့်မှာ Good Drama ၆ ကားလို့ပြောခဲ့တယ်... ခု ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ Gentlemen's dignity ကိုလဲ Good drama list ထဲ ပြောင်းလိုက်တော့ ၇ ကားဖြစ်သွားပြီ...
၄။ The Moon that Embrace the Sun
· Kim Soo Hyun as Lee Hwon
· Yeo Jin Goo as Hwon (15 years old)
· Han Ga In as Heo Yeon Woo / Wol
· Kim Yoo Jung as Yeon Woo (13 years old)
· Jung Il Woo as Prince Yang Myung
· Lee Min Ho as young Yang Myung
· Kim Min Seo as Yoon Bo Kyung
· Kim So Hyun as young Bo Kyung
ဇာတ်လမ်းက ပြောရမယ်ဆို နည်းနည်းရှုပ်တော့ သွားသာကြည့်လိုက်ပါလို့ပဲပြောချင်တော့တယ်… သိတဲ့အတိုင်းပဲ ကိုရီးယားနန်းတွင်းကားတွေရှုပ်ရင် ထူးဆန်းထွေလာစိတ်နယ်လွန်ဖြစ်ရပ်တွေပါ ပါလာတတ်တော့ ပြန်ပြောပြဖို့တော်တော်ခက်ပါလိမ့်မယ်… ခုကြိုးစားပြီး ပြောကြည့်မယ်နော်…
အသက် ၁၃နှစ်အရွယ်မှာ Yeon-Woo ဟာ သူမအစ်ကို အစိုးရ၀န်ထမ်းစာမေးပွဲအောင်တဲ့ပွဲကိုတက်ဖို့ သူမအမေနဲ့အတူ နန်းတော်ထဲကိုရောက်ခဲ့တယ်… (သူမဖေဖေကလဲ နန်းတော်ထဲမှာ အကောင်ကြီးကြီးအမတ်တစ်ယောက်ပဲပေါ့… ဒီတော့ သူမကလဲ Noble family ထဲက မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပေါ့)… အဲဒိနေ့မှာ မထင်မှတ်ပဲ ဘုရင့်သားတော်အိမ်ရှေ့မင်းသား Lee Hwon ဟာ သူ့ အဖေတူ အမေကွဲ အစ်ကို မင်းသား Yang Myung (ဟိုတစ်လောက မြန်မာပြည်ကိုလာသွားတဲ့မင်းသား) နဲ့တွေ့ဖို့ နန်းတော်ပြင်ခိုးထွက်ဖို့ကြိုးစားနေတာကို တွေ့လို့ သူခိုးထင်ပြီး စွတ်စွဲရာက သူတို့ ၂ယောက်ခင်မင်ခဲ့ကြတယ်… ဒီလိုနဲ့သူတို့ ၂ယောက် ချစ်ကြိုက်ခဲ့ကြပြီး နန်းတင်တဲ့နေ့မှာလဲ သူမကိုပဲ မင်းသားက သူ့ဇနီးလောင်း ဘုရင်ကတော်လောင်းအဖြစ်တင်မြှောက်ခဲ့တယ်… ဒါကို မနာလိုတဲ့လူတစ်စုရယ်၊ ဘုရင့်အမေကလဲ သူတို့အမျိုးဘက်က အင်အားရော့သွားမှာစိုးတာရယ်ကြောင့် သူ့အမျိုးဘက်က မိန်းကလေးနဲ့ပဲပေးစားချင်တဲ့အတွက် Yeon-Woo ကို အောက်လမ်းဆေးဝါးပညာနဲ့ အသေသတ်ခဲ့ကြတယ်… သို့သော်ကံကောင်းချင်တော့ Yeon-Woo ကို ကိုယ်ဝန်ရှိစဉ်က သူမမေမေဟာ Shaman (နန်းတွင်းစိတ်နယ်လွန်ပညာရှင်) မိန်းမတစ်ယောက်ကိုကယ်ဖူးတော့ ဒီမိန်းမက သူ့သူငယ်ချင်း Shaman ကို ဒီကလေးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့မှာခဲ့တယ်… ဒိအတွက် ဘုရင့်အမေခိုင်းတဲ့ shaman မိန်းမဟာ မင်းသမီးကို တကယ်တန်းတော့ အသေမသတ်ပဲ၊ ခေတ္တပဲ သေအောင်လုပ်ပြီး ခေါင်းထဲကနေပြန်တူးဖော်ကာ ကျိန်စာကိုပြေအောင်လုပ်ခဲ့တယ်… ဒါပေမဲ့ Yeon-Woo ကတော့ သူမဘ၀ကိုလုံးဝပြန်သတိမရတော့ပဲ Shaman မိန်းမကြီးရဲ့ မွေးစားသမီးအဖြစ်ကြီးပြင်းခဲ့တယ်… သူမကိုချစ်တဲ့ မင်းသားလေး Lee Hwon ဟာလဲ သူ့ချစ်သူဆုံးပါးသွားပြီလို့ထင်ခဲ့တယ်… ၈ နှစ်ကြာပြီးနောက်မှာ Yeon ဟာ Wol ဆိုတဲ့ အမည်နဲ့ Shaman တစ်ယောက်အဖြစ်ပြန်လည်ရောက်လာခဲ့တယ်… နှစ်တွေကြာခဲ့ပင်မဲ့ သူမချန်ရစ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ သူမကို မှတ်မိနေပါသေးတယ်… (သို့သော် မသေမချာပေါ့နော်… အားလုံးကတော့ သေသွားပြီထင်တာကိုး)…. သူမရဲ့ မဆုံးသေးတဲ့ ရှေးရေစက်က လက်ရှိမှာဘုရင်ဖြစ်နေတဲ့ သူမရဲ့ချစ်သူ၊ သူမကိုခုလိုဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ ချစ်သူရဲ့အဖွားနဲ့ ချစ်သူရဲ့ညီမ၊ ဒါတွေအားလုံးကို ဘယ်လို ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်သလဲ? သူမအပေါ်သစ္စာရှိပြီး စွဲလန်းလွန်းတဲ့ချစ်သူနဲ့ သူမ ရထိုက်ခဲ့တဲ့ ဘုရင်ကတော်ရာထူးကို သူမဘယ်လိုပြန်ယူမလဲဆိုတာ ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်လိုက်ကြပါနော်…
ဒီကားကိုကြည့်ဖြစ်တာတော်တော်ကြာပြီလို့ခံစားရပင်မဲ့ ၂၀၁၂ထဲမှာပြသခဲ့တာပါ… သူက ၂၀၁၂ အစပိုင်းမှာပြသခဲ့တဲ့ကားလေးပါ…. မင်းသား Kim Soo Hyun ပုံစံကိုအစက အထင်မကြီးခဲ့ပါဘူး.. ရုပ်ကလဲ မြင်တာနဲ့ဒီလောက်စွဲလန်းရလောက်မယ်မထင်ခဲ့လို့ပါ…. ဒါပေမဲ့ လုံးဝလုံးဝ လုံးဝ infinity ကို မှားပါတယ်… ဒီမင်းသား သရုပ်ဆောင်ကောင်းချက်က လက်လန်တယ်ပဲပြောရမှာပါ… သူရုပ်သိပ်မချောတာလုံးလုံးပျောက် သူ့ကိုတွေ့တာလဲ လှိုက်ကနဲဖိုကနဲ သူ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေက ကောင်းလွန်းပါတယ်… မင်းသမီး Han Ga In ကိုတော့ Bad guy နဲ့ တခြားကားတွေမှာအစကတည်းကကြည့်ဖူးပါတယ်… (မဗေဒါစိတ်ထဲမှာ တစ်ချက်တစ်ချက်သူက စိုးမြတ်သူဇာနဲ့တူတယ်လို့ခံစားရတယ်… သေချာကြည့်ပြန်တော့လဲ မတူပြန်ဘူး)… မင်းသားကိုစစချင်း ရုပ်ရှင်မကြည့်ပဲ ပိုစတာလောက်နဲ့ စိတ်မ၀င်စားခဲ့တာတောင် မင်းသမီးက မင်းသားထက်အသက်အများကြီးကြီးတာ သိသာလွန်းပါတယ်… ဒါပေမဲ့ ဒီကားမှာဇာတ်လမ်းအရ မင်းသမီးက မင်းသားနဲ့ရွယ်တူ ဒါမှမဟုတ် အနည်းငယ် ငယ်ပါတယ်…. သရုပ်ဆောင်ကတော့ ၂ယောက်လုံးကောင်းပါတယ်… ဒီကားဟာ မင်းသားရဲ့ ဒုတိယကားဖြစ်ပင်မဲ့ ၀ါရင့် မင်းသမီးကို ဦးဆောင်ပြီးသရုပ်ဆောင်သွားနိုင်ပါတယ်… (ခုချိန်ကစပြီး Kim Soo Hyun ကားထွက်သမျှကြည့်မယ်၊ ဒီကားပြီးတော့မှ သူ့ရဲ့ပထမကား Dream High 1 ကို သူ့ကြောင့်စကြည့်တာ)… မင်းသားငယ်ငယ်ကလုပ်တဲ့ ကလေးသရုပ်ဆောင်ကောင်လေး Yeo Jin Goo ကလဲ ကလေးလိုချစ်ဖို့မကောင်းပင်မဲ့ ကြီးလာရင်တော့ မင်းသားဖြစ်မှာသေချာသလောက်ပဲ… Act cool ကတော့လုပ်တတ်ပါ့… မင်းသမီးငယ်ငယ်သရုပ်ဆောင်တဲ့ကောင်မလေးကတော့ သူ့ကားတော်တော်များများကြည့်ဖူးပါတယ်… သရုပ်ဆောင်လဲ ကလေးနဲ့မလိုက်အောင်ကောင်းပါတယ်..ပဲပေးတာ ရိုးသားတဲ့မိန်းကလေးပုံစံနဲ့ကြာပစ်တတ်တာ ပိုင်လွန်းလို့ Kim Yoo Jung ကို မင်းသမီးအမြန်ဖြစ်အောင် အရွယ်ရောက်စေချင်ပြီ… ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကလေးနဲ့တောင် မတူအောင် ချစ်ကြိုက်လွမ်းဆွေးကို သရုပ်ဆောင်နိုင်လွန်းတော့ လောလောဆယ်အချိန်မှာ မဗေဒါမျက်လုံးထဲ ကန့်လန့်ဖြစ်နေတယ်…. ဒီကောင်မလေး မြန်မြန်ကြီးမှပဲ…
သရုပ်ဆောင်တွေအကြောင်းပြီးတော့ ဇာတ်လမ်းအကြောင်းပေါ့… ဇာတ်လမ်းထဲမှာ မဗေဒါသဘောအကျဆုံးကတော့ မင်းသားက ဘုရင်ဖြစ်တော့ ပေးစားတဲ့ နောက်မင်းသမီးတစ်ယောက်ကို မိဖုရားမြှောက်လိုက်ရပင်မဲ့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီး လုံးဝအတူတူမနေဘူး… (အပြင်မှာတော့ ဒီလိုယောကျာင်္းရှိမယ်မထင်… ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးကိုပဲ သဘောတွေကျနေတာ.. ခွိ ခွိ) မင်းသမီးပြန်လာတော့လဲ မင်းသမီးကို သူ့ချစ်သူနဲ့တူလို့ သတိထားမိပြီး ချစ်သွားတာ… မင်းသမီးမှ မင်းသမီးပဲ… ကားက ကြည့်ထားတာ ၁နှစ်ကျော်ပြီဆိုတော့ သိပ်တော့အသေးစိတ်မမှတ်မိတော့ပင်မဲ့… ကျောင်းစာတွေရှိတာတောင်မလုပ်ပဲ အဲဒိကားကိုပဲ ဇာတ်တိုက်မဖြတ်နိုင်ကြည့်ခဲ့တာ… (Airing လုပ်တဲ့အချိန်ကြည့်တာမဟုတ်ပဲ အားလုံးပြပြီးမှကြည့်တာဆိုတော့ သိတဲ့အတိုင်းပဲ ဘရိတ်မရှိ အပြီးထိကြည့်တော့တာ)…
ဒီကားရဲ့Rating ဟာ ဂဏန်း ၂လုံးအောက်ကျမသွားခဲ့တဲ့အပြင် အဆုံးအပိုင်းတွေမှာဆို တစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ ၄၂ရာခိုင်နှုန်းကြည့်သူအရေအတွက်ရခဲ့တယ်… (အဲလိုရဖို့မလွယ်ဘူး)… ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် မကြည့်ရသေးရင်တော့ ဒီကားလေးကို ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်လိုက်နော်… မဗေဒါလိုပဲ ရပ်မရဖြစ်ပြီး Kim Soo Hyun ရဲ့ ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ဖြစ်သွားမယ်…
မယုံရင်အောက်က ဆုတွေကြည့်လိုက်… MBC station ကပေးတာမဟုတ်ပဲ တခြား organization တွေကပေးတဲ့ဆုတွေ မင်းသားတစ်ယောက်တည်းအများကြီးရတယ်…
§ Best Picture Award (Kim Sun Il, Jung Seung Woo)
§ Excellence Actor Award (Kim Soo Hyun)
§ Best OST Award - "Back In Time" (The Moon That Embraces the Sun OST) by Lyn
§ Best Actor Award (Kim Soo Hyun)
§ Best TV Drama
§ Best TV Drama Actor (Kim Soo Hyun)
§ 20's Drama Star (Male) (Kim Soo Hyun)
၅။ I Miss You (aka) Missing You
· Park Yoo-chun as Han Jung-woo
· Yeo Jin-goo as young Han Jung-woo
· Yoon Eun-hye as Lee Soo-yeon/Zoe Lou
· Kim So-hyun as young Lee Soo-yeon
· Yoo Seung-ho as Kang Hyung-joon/Harry Borrison
· Ahn Do-kyu as young Kang Hyung-joon
Lee Soo-yeon ဆိုတဲ့ ၁၅နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးဟာ သူမအဖေလူသတ်သမားဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် ကျောင်းကတခြားလူတွေရဲ့ နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရပြီး သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်မှမရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ Han Jung-woo ဆိုတဲ့ သူဋ္ဌေး (Gangster) ရဲ့သားနဲ့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးတွေကြောင့်တွေ့ပြီး သူငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ အနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့ Lee Soo-Yeon ကို ကာကွယ်ပေးရင်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စိတ်ထဲကနေချစ်နေခဲ့ကြတယ်။ တစ်နေ့မှာ Jung Woo ကို လူဆိုးတွေဖမ်းခေါ်သွားတာကို တွေ့လိုက်တဲ့ Lee Soo-Yeon ဟာ သူ့သူငယ်ချင်းကို ကူညီဖို့ကြိုးစားရင်းသူပါ ဖမ်းခေါ်သွားခံရတော့တယ်…
တကယ်တော့ သူတို့ကိုဖမ်းခေါ်သွားဖို့ စေခိုင်းတဲ့သူကတော့ Kang Hung-joon (ဒု-မင်းသား) ရဲ့ အမေဖြစ်တယ်… Kang Hyung-joon ရဲ့ အမေဟာ Jung Woo အဖိုးရဲ့ မယားငယ်ဖြစ်ပြီး Jung Woo အဖေနဲ့ အမွေလုနေကြတာဖြစ်တယ်… အဖိုးကြီးဆီကရလိုက်တဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို Swiss Bank ကိုအောင်မြင်စွာလွှဲပြီးပင်မဲ့ သူမနဲ့ သူမသားကို Jung Woo အဖေက ဖမ်းယူထားခဲ့တယ်… ဒါကို ပြန်လွတ်မြောက်အောင် Jung Woo ကိုဖမ်းပြီး သူ့အဖေကို ပြန်အကျပ်ကိုင်တာဖြစ်တယ်…. ဒါပေမဲ့ ဘုမသိဘမသိ ဓားစာခံဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ Jung Woo နဲ့ Lee Soo-Yeon တို့ဘ၀တွေဟာ အပြောင်းလဲကြီး ပြောင်းခဲ့တယ်… Lee Soo-Yeon ဟာ ပြန်ပေးဆွဲသူတွေရဲ့ မတရားပြုကျင့်ခံခဲ့ရတယ်… Jung Woo ဟာ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားပေမဲ့ Lee Soo-Yeon ကို ပြန်ကယ်ဖို့အတွက် သူ့အဖေက မကူညီခဲ့တဲ့အပြင် သေပြီဆိုပြီး အမှုကို လက်ဆဖြောက်ခဲ့တယ်… ဒဏ်ရာနဲ့သေလုမြောပါး Lee Soo-Yeon ကို Kang Hyung-joon က ကယ်တင်ပြီး သူနဲ့ပဲ အတူနေစေချင်တဲ့အတွက် သူမပျောက်လို့လိုက်ရှာတဲ့ သူမ မွေးစားအဖေ ရဲအရာရှိကို သတ်ခဲ့ပြီးပြင်သစ်ကိုထွက်ပြေးကာ ဇာတ်မြုပ်နေခဲ့တယ်…
၁၄နှစ်ကြာအပြီးမှာ Jung Woo ဟာ ရာဇ၀တ်မှုတွေကိုလိုက်တဲ့ စုံထောက်ရဲတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီး သူ့ချစ်သူ မသေသေးတာသေချာတဲ့အတွက် Lee Soo-Yeon ကိုရှာဖွေနေခဲ့တယ်… ပြန်ပေးဆွဲခံရတဲ့ အဖြစ်အပျက်ပြီးကတည်းက သူဟာအိမ်ပေါ်ကဆင်းလာပြီး မင်းသမီးအမေတို့နဲ့ပဲ နေခဲ့တယ်… Lee Soo-Yeon ကတော့ Zoe Lou ဆိုတဲ့ နာမည်ကြီး ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး အပြင်ပန်းမှာ ပျော်နေပုံရပင်မဲ့ အတိတ်ဆိုးတွေက တစ်ခါတစ်ရံခြောက်လှန့်နေဆဲ… ကံကြမ္မာက သူတို့ ၂ယောက်ကို ပြန်ဆုံပေးတဲ့အခါမှာ သူမကို ပြန်မကယ်ခဲ့တဲ့ Jung Woo ကို သူမခွင့်မလွှတ်နိုင်ခဲ့ဘူး… သူမနဲ့ လက်ရှိမှာ ငယ်ငယ်ကတည်းကလဲ တူတူကြီးလာတဲ့ အသက်သခင်လဲဖြစ်တဲ့ Kang Hung-joon ကိုပဲ လက်ထပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားတယ်… ဒါပေမဲ့ သူမ မသိခဲ့တာက သူမကို ဒီလိုဘ၀ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းရင်း၊ သူမ မသိတဲ့ Kang Hung-joon ရဲ့ အတွင်းစိတ်ဟာ ဘယ်လောက်သွေးအေးပြီး ကလဲ့စားခြေဖို့ပဲ ရှိတဲ့အကြောင်း၊ သူမကို မကယ်မိလို့ ၁၄ နှစ်လုံး ဘ၀ကို ဖြစ်သလိုနေ အဆက်မပြတ်ရှာဖွေပြီး ရူးရူးမူးမူးချစ်ခဲ့တဲ့ ငယ်ချစ် Jung Woo ရဲ့ အကြောင်းတွေပေါ့….
ဒီကားကို Good drama စာရင်းထဲ ထည့်ရင်ကောင်းမလား မထည့်တာကောင်းမလားလို့ စဉ်းစားရနည်းနည်းကျပ်ခဲ့ပါတယ်… ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်မပတ်ဝန်းကျင်က ၀ါသနာတူ Drama ချစ်ပရိတ်သတ်တော်တော်များများက သိပ်မကြိုက်ကြပါဘူး… အကြောင်းကတော့ ဒုတိယမင်းသားကို ပိုသနားလို့ပါတဲ့… ဒုတိယမင်းသားရဲ့ ဇာတ်ကောင်ကအမှန်တော့ လူဆိုးပါ။ ဒါပေမဲ့ သူ့ရင်ထဲက အတိတ်ရဲ့ နာကျင်မှုတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ လူဆိုး၊ ဒီလူဟာသနားစရာလဲကောင်းတယ်၊ တကယ်လို့ သူ့အမေနဲ့ Jung Woo အဖေသာပိုက်ဆံပြိုင်မလုကြရင် သူဟာလဲ ဒီလိုခါးသီးမှုတွေခံစားခဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ သူ့ဘ၀မှာ သူနက်နက်နဲနဲချစ်တဲ့ သူ့အတွက် ၁ယောက်တည်းရှိတဲ့ Lee Seo Yeon ကို လက်လွှတ်မခံနိုင်ဘူး။ ဒီခံစားချက်တွေအကုန်လုံးကို ပိုင်နိုင်အောင် သရုပ်ဆောင်သွားနိုင်တဲ့ အသက် ၁၉နှစ်အရွယ်မင်းသားချော Yoo Seung-Ho ကြောင့်ပါပဲ။ သူဟာသူ့ဇာတ်ကောင်ကို ပုံဖော်တဲ့နေရာမှာ သူ့ဇာတ်ကောင်ဘက်က ခံစားချက်တွေကို ပေါ်လွင်အောင် ပရိတ်သတ်ဆီအရောက်ပို့ပေးနိုင်တယ်။
အဲ ဒါပေမဲ့ တစ်ချိန်ထဲမှာပဲ ပထမမင်းသားဖြစ်တဲ့ Micky Yoo Chun ဟာ Melodrama လို ခံစားချက်ကို အရမ်းသရုပ်ဖော်ရတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေအတွက် သူ့သရုပ်ဆောင်အားက မကောင်းသေးဘူးလို့ မဗေဒါထင်တယ်… Micky Yoo Chun ကို ကြိုက်တဲ့ ပရိတ်သတ်ထဲမှာ ကျွန်မပါပါတယ်… သူ့ထွက်သမျှကားတိုင်းလဲ ကျွန်မကြည့်ပြီးပါပြီ… ကားတိုင်းလဲ သူက ပထမမင်းသားချည်းပါပဲ… ဒါပေမဲ့ သူ့သရုပ်ဆောင်အရည်အသွေးဟာ Comedy Drama လောက်ကိုသာ နိုင်ရင်နိုင်မယ်။ Melodrama အထိတော့ မရောက်သေးပါဘူး။ ကျွန်မအစ်မက အစကတည်းက သူ့ကိုမကြိုက်တဲ့ အခံရှိတော့ ဒီဇာတ်လမ်းကိုလုံးဝ သည်းမခံနိုင်တော့ဘူးပေါ့။
ဒါပေမဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းကို သရုပ်ဆောင်တဲ့ လူတွေကိုမကြည့်ပဲ။ ဇာတ်လမ်းကျောရိုးကိုပဲ စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ ကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်သလို။ Lee Seo Yeon နဲ့ Jung Woo ငယ်ချစ် အတွဲကို၊ Zoe Lou နဲ့ Harry Borrison ၊ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာနဲ့ သူဋ္ဌေးငယ်ငယ်လေး အတွဲထက်ပိုသင့်တော်တယ်လို့ မဗေဒါကတော့ ထင်ပါတယ်။
ဒီကားမှာ မင်းသားသရုပ်ဆောင် မကောင်းတာကို သူငယ်ငယ်က ကလေးသရုပ်ဆောင် Yeo Jin-goo နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်တောင် ကလေးသရုပ်ဆောင်က ပိုကောင်းတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ လူပျိုပေါက်ကလေးသရုပ်ဆောင်လဲဖြစ်၊ ရုပ်ရည်ကလဲ Micky Yoo Chun လောက်မရှိပါပဲ ကြည့်နေတဲ့ပရိတ်သတ်ကို ဒီကောင်လေးက Cool သားပဲဆိုတဲ့ ခံစားချက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကလေးသရုပ်ဆောင်ချည်းပဲ ပထမ အပိုင်း ၄ပိုင်းပါ၊ ၅ပိုင်းရောက်မှ အသက်ကြီးသွားပြီး Yoo Chun နဲ့ Yoon Eun Hye ဖြစ်သွားတာပါ။ အသက်လဲကြီးသွားရော ဇာတ်လမ်းက မင်းသားသရုပ်ဆောင်နည်းနည်းလိုတာနဲ့ပဲ ပေါ့သွားတော့တာပဲ။ ပြောရမယ်ဆို ဒီကားဟာ မင်းသမီး Yoon Eun Hye ရဲ့ ပထမဆုံး Melodrama ပါပဲ။ သူမကောင်းမွန်ပြေပြစ်စွာ သရုပ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ Yoo Chun ကို သရုပ်ဆောင်မကောင်းဘူး ညံ့တယ်လို့ မပြောသင့်ပါဘူး။ သူ့ပြိုင်ဘက်တွေက အရမ်းအားကောင်းသွားပြီး သူသိပ်မလိုက်နိုင်ဖြစ်သွားတယ်လို့ပဲ ကျွန်မထင်ပါတယ်။
သူရှေ့ဆက်ဒိထက်ကြိုးစားဖို့လိုနေပြီ။ “Sung Kyung Kwan’s scandal” ကားမှာ ခေါင်းဆောင်မင်းသားဖြစ်ခဲ့တဲ့ Yoo Chun နဲ့ အဲဒိကားထဲက တတိယမင်းသား (မင်းသမီးနဲ့တောင် မတွဲရတဲ့ မင်းသား) Soong Jong Ki ရဲ့ “Nice Guy” ကားက ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့်ပြခဲ့တော့ ဇာတ်လမ်းတစ်ခုမှာ အဓိကသရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့ အရည်အချင်း စကားပြောပုံကို စဉ်းစားသာကြည့်ကြပေတော့။ ပတ္တမြားမှန်ရင် နွံမနစ်ဘူး။ သရုပ်ဆောင်ကောင်းရင် ပရိတ်သတ်ကလက်ခံမှာပဲ။ (မြန်မာအနုပညာရှင်တွေကို စောင်းပြီး အသိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်)။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် မဗေဒါကတော့ Yoo Chun ကို ကြိုက်လို့ကို သူဒိထက်သရုပ်ဆောင်ကောင်းလာဖို့ဆုတောင်းရင်း သူ့နောက်ထွက်မဲ့ကားတွေလဲ စောင့်ကြည့်ဖို့ အသင့်ပါပဲ။
ဇာတ်လမ်းကို ဝေဖန်ရရင်ဖြင့် တစ်ကားလုံးကောင်းပါရဲ့ နောက်ဆုံးအပိုင်းလေးတွေကျမှ နည်းနည်ချာသွားတယ်။ အဲဒါကြောင့် 4/5 ပဲပေးတာပါ။ ခြေဆာနေတဲ့ လူတစ်ယောက် စက်ဘီးနဲ့ထွက်ပြေးတာကို ရဲတပ်ဖွဲ့တစ်ခုလုံးက မမိလိုက်ဘူးဆိုတော့ “မင်းတို့ကိုပြည်သူ့ရဲတွေ ၀ိုင်းထားကြပြီ” ဆိုပြီး နောက်ဆုံးမှရောက်လာတတ်တဲ့ မြန်မာ့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့များကွာပါ့…
ဒီကားဟာ သူ့ကိုပြတဲ့ MBC station ကပေးတဲ့ ဆုကလွဲလို့ တခြားကပေးတဲ့ဆုတွေမရခဲ့ပါဘူး..
၆။ Wild Romance
Genere : Romance/ Comedy/ Sports/ Suspense
Lee Dong-wook as Park Mu-yeol
Lee Si-young as Yoo Eun-jae
Jessica Jung as Kang Jong-hee, Mu-yeol's ex-girlfriend
Red Dreamer Baseball အသင်းက နာမည်ကြီး ကစားသမား Park Mu-yeol ဟာ တော်လို့နာမည်ကြီးလို သူ့ရဲ့ စိတ်ဆပ်မှုကြောင့်လဲလူသိအတော်များပါတယ်… Red Dreamer အသင်းရဲ့ ပြိုင်ဘက် Blue Seagull အသင်းကို မိသားစုလိုက်အားပေးတဲ့ Yoo Eun-jae ဟာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် Park Mu-yeol ရဲ့ ကိုယ်ရံတော်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါတယ်… မတည့်တဲ့သူ ၂ယောက် ရန်ဖြစ်ကြရင်း အတူတူနေလာရင်း တစ်ယောက်ပျော့ကွက်တစ်ယောက်က စောင့်ကြည့်နေခဲ့တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အဲဒိအတောအတွင်းမှာပဲ တစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ယောက်ပိုသိလာသလို Mu-yeol ကို လုပ်ကြံချင်နေတဲ့သူ၊ အမြဲချိန်းခြောက်နေတဲ့သူ Mu-yeol နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ သူ့ချစ်သူဟောင်း (SNSD Jessica) ကိုလဲ ခြောက်လှန့်နေတဲ့အဖြစ်တွေကြုံလာခဲ့တယ်။ အဲဒါဘယ်သူလဲ။ ဘာလို့ဒီလိုလုပ်တာလဲ။ Eun Jae သိပ်မုန်းတဲ့ ပြိုင်ဘက်အသက် ကစားသမား Mu-yeol ကို သူမ ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ။ သိချင်ရင်ကြည့်လိုက်နော်…
ဒီကားကပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ တချို့ Comedy Romance ကားလေးတွေလိုပါပဲ။ Heavy emotion တွေပါတဲ့ melodrama type တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ Mu-Yeol ကို လုပ်ကြံချင်တဲ့သူက သူ့အနီးနားကလူတွေထဲက ဘယ်သူဖြစ်မလဲ။ Mu-Yeol တကယ်ချစ်တဲ့သူက ဘယ်သူလဲ။ သူ့အနီးနားမှာရှိတဲ့ မိန်းကလေး ၂ယောက်ထဲက သူ့စိတ်ထဲက တကယ်ချစ်တာဘယ်သူလဲဆိုတာကို အသက်အန္တရာယ်ကြုံလာတော့ သူဘယ်သူ့ကိုကယ်လဲဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားအောင်ပြထားတယ် အစက မင်းသားကယ်လိုက်တဲ့လူကို စိတ်ထဲနဲနဲထင့်သွားပင်မဲ့ နောက်ဆုံးအပိုင်းမှာ မင်းသားက ပြန်ရှင်းပြတော့လဲ သူဂရုစိုက်ရှာသားပဲလို့တွေးမိတယ်… ဒီကားကံဆိုးချက်က ဒီကားပြတဲ့အချိန်မှာ ဟိုဘက် TV station က “The moon embrace the sun” ကိုပြနေတယ်… သိတဲ့အတိုင်း ဟိုကားက အရမ်း Rating ကောင်းတော့ ဒီကားက Rating သိပ်မကောင်းတော့ဘူးပေါ့…. ဟိုကားကတော့ တကယ့် History, melodrama ဆန်ဆန်ဆိုတော့ ဇာတ်လမ်းကပို serious ဖြစ်တာပေါ့… ဒီတော့ Comedy Romance တွေက သိပ်မယှဉ်နိုင်ဘူးပေါ့… ဒါပေမဲ့ ဒီကား Airing လုပ်နေတုန်းက မဗေဒါ တစ်ပတ်၁ခါကို စောင့်စောင့်ကြည်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာလို့ကြည့်ဖြစ်လဲဆိုတော့ မင်းသား မင်းသမီးကြိုက်လို့ပါ… အထူးသဖြင့် မင်းသမီး Lee Si Young ကို အရင်က စိတ်ပုတ်မ လုပ်တဲ့ကားတွေမှာကတည်းက သူ့မျက်နှာလေးကို ချစ်တာပါ။ သူခေါင်းဆောင်မင်းသမီးဖြစ်ပြီဆိုတော့ အားပေးတဲ့သဘောပါ။ အားပေးရကြိုးလဲနပ်ပါတယ်။ သူသရုပ်ဆောင်ကောင်းပါတယ်။ သူက ဒီကားမတိုင်ခင်ကတော့ Super Junior ထဲက Choi Si Won နဲ့တစ်ကားထွက်ပါသေးတယ်။ စုံထောက်ကားပါ။ Choi Si Won သရုပ်ဆောင်တာသိပ်မကောင်းလို့ မကြည့်ဖြစ်ဘူး။ (Sorry! Choi Si Won fan… I know he is handsome)… ဒီကားမှာ မင်းသားကလဲ Lee dong Wook (My girl ထဲကမင်းသား) ဆိုတော့ ကြိုက်တယ်လေ။ မင်းသားက ဒီကားမှာ နှုတ်ခမ်းမွှေးနဲ့ဆိုတော့ စတိုင်ပြောင်းနေတယ်။ စစကြည့်ချင်းတော့တမျိုးကြီးပဲ။ နောက်တော့ မျက်လုံးယဉ်သွားတော့လဲ ကြည့်ကောင်းသွားပါတယ်… Anyway, မဗေဒါကြိုက်တဲ့ ကားစာရင်းထဲတော့ ထည့်ထားလိုက်တယ်။ ၀ါသနာတူတွေကြည့်ရင်လဲ အပျင်းပြေမဲ့ကားလေးတစ်ကားပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဘာဆုမှမရဘူးထင်တယ်။ ရှာလို့မတွေ့ဘူး။
၇။ Gentleman’s dignity
Genere : Romance/ Comedy/ Drama
Yoon Jin-yi as Im Meari
Kim Soo-ro as Im Tae-san
Kim Jung-nan as Park Min-sook
Lee Jong-hyun as Colin
ဒီကားဟာ ယောကျာင်္း version “Sex and the city” လို့ပြောရမယ်ထင်ပါတယ်… အသက် ၁၈နှစ်ကတည်းကခင်ခဲ့ကြတဲ့ ယောကျာင်္းလေးသူငယ်ချင်း ၄ယောက် အသက် ၄၀အထိ အချစ်၊ အလွမ်း၊ အောင်မြင်မှုနဲ့ ရှုံးနှိမ့်မှုတွေကို ခင်မင်မှုနဲ့ အတူတွေ့ကြုံဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့အကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတာပါ။
မိန်းမနဲ့ပတ်သတ်ရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိပြီး ပွေရှုပ်တတ်တဲ့၊ ရုပ်ရည်၊ စီးပွားအခြေအနေ၊ ပညာအားလုံးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ Kim Do-Jin တစ်ယောက် Seo Yi-Soo ကို ချစ်မိခဲ့တယ်…
သူကိုအံ့သြသွားစေတာက အဲဒိမိန်းကလေးက သူ့ကို စိတ်မ၀င်စားဘူး… သူစိတ်ဝင်စားတာက Kim Do Jin ရဲ့သူငယ်ချင်း Im Tae-San ကိုဖြစ်နေတယ်… ဒီလိုနဲ့ Kim Do Jin တစ်ယောက် သူ့ဘ၀ရဲ့ ပထမဆုံး တစ်ဖတ်သတ်အချစ်ဇာတ်လမ်းကို စတင်ခဲ့ပြီး Seo Yi Soo နှလုံးသားကိုရဖို့ကြိုးစားတော့တယ်..
Im Tae-San ကတော့ Seo Yi-Soo ရဲ့ အခန်းဖော်သူငယ်ချင်း Hong Se-ra နဲ့ ချစ်သူတွေဖြစ်နေလေရဲ့။ ဒါပေမဲ့ Yi Soo က သူ့ကိုကြိုက်နေတာ ပေါ်သွားပြီး Sera ကလဲ လက်ထပ်ချင်စိတ်မရှိတဲ့အခါ သူ့မှာပြဿနာတွေတက်လေရဲ့… ဒီကြားထဲ သူ့သူငယ်ချင်း Choi Yoon ကို အသေအကြေလိုက်ကြိုက်နေတဲ့ ညီမငယ် Im Meari ကြောင့်လဲ စိတ်ညစ်နေရသေးပေါ့…
Choi Yoon ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄နှစ်ကမှ ဇနီးသည်ကွယ်လွန်သွားတဲ့ မုဆိုးဖို ရှေ့နေတစ်ယောက်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ သူ့ကို ငယ်ငယ်ကတည်းက အတင်းလိုက်ကြိုက်ပြီး သံယောဇဉ်ရှိခဲ့တဲ့ သူ့သူငယ်ချင်း Im Tae-San ရဲ့ ညီမလေး Maeri ကို စိတ်ထဲကချစ်နေပင်မဲ့ အသက်အရွှယ်ကွားခြားမှုကြောင့်ရော သူ့သူငယ်ချင်းနဲ့ အခင်အမင်မပျက်ချင်တာကြောင့်ရော သူ့စိတ်ကိုဖုံးကွယ်ပြီး ကောင်မလေးကို အမြဲငြင်းဆန်နေရသူပေါ့..
Lee Jung-rok ကတော့ သိပ်ချမ်းသာတဲ့ မမကြီး Park Min-Sook နဲ့ လက်ထပ်ထားပင်မဲ့ တွေ့သမျှမိန်းမတွေနဲ့ ပွေရှုပ်လို့ အိမ်ထောင်ရေး မှာ ယုံကြည်မှုမခံရပဲ ပြဿနာအမြဲရှိသူပေါ့…. (အဲဒိနေရာမှာသရုပ်ဆောင်တဲ့လူရော၊ အဲဒိ ဇာတ်ကောင်ကိုရော ကြည့်လို့မရ)
ဒီလိုဒီလို သူတို့ချင်းတောင်ပတ်ရှုပ်နေတဲ့ ဘ၀ထဲကို Colin ဆိုတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက် ကိုရီးယားကိုရောက်လာပြီး သူတို့ သူငယ်ချင်း ၄ယောက်ထဲက ၁ယောက်ဟာ သူ့အဖေပါလို့ လာရှာတဲ့အခါ………..
ဒီကားကို အစက မဗေဒါရဲ့ Good Drama ထဲမှာထည့်မတွက်ထားဘူး။ Mabaydar's Page ဖေ့ဘွတ်မှာလဲ ၃.၅မှတ်ပဲ ပေးထားတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကားအလည်နားလောက်မှာ နည်းနည်းလေးပျင်းသွားလို့။ ပြီးတော့ ဒီလောက်ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်တွေပါလို့ ဒိထက်ပိုပြီး မှန်းထားလို့လဲဖြစ်မှာပေါ့။ ခုတော့ ၄မှတ်လောက်တော့ရသင့်တယ်ထင်လို့ ပြောင်းပေးလိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ “Wild Romance”ကိုတောင် Good Drama စာရင်းထဲထည့်ထားတော့ ဒီကားလဲ good drama ထဲပါသင့်တယ်လို့ စဉ်းစားမိလို့ထည့်လိုက်တာပါ။ ပထမ 2012 Drama review အပိုင်း (၁) ပိုစ့်မှာ ကောင်းတဲ့ကား ၆ကားလို့ပြောထားတာ ဒီကားကို So So drama ထဲ ထည့်တွက်ထားလို့။
ဒါပေါ့နော်… ခေါင်းဆောင်မင်းသား Jung Dong Gun ကတော့ အမှတ်ပြည့်ရပါတယ်။ သူမပါရင်လဲ ဒီကားက ဒီလောက် rating ကောင်းကောင်းရမယ်မထင်ပါဘူး။ မင်းသမီး Kim Ha Neul တစ်ယောက် Jung Dong Gun နဲ့တွဲရတာတော်တော်ပျော်နေတယ်ထင်တယ်။ Act Cute ကလဲ လုပ်သလားမမေးနဲ့။ သူ့ဇာတ်ကောင်က အသက် ၃၅၀န်းကျင်လောက်ရှိမယ်။ ဆရာမအလုပ်လုပ်နေတာ။ ပြီးတော့ မင်းသားတွေနဲ့ဆို ကလေးလိုလို ဘာလိုလို act cute လုပ်တာ။ ဒါပေမဲ့လဲ အကောင်းဘက်ကနေပြန်နားလည်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့။ ၁အချက် သူနဲ့ ကျူနေတဲ့ ယောကျာင်္းက သူ့ထက်အသက်ကြီးတဲ့အတွက် သူက ကလေးလို ချွဲနွဲ့လို့ရတယ်။ ၂အချက် လူတွေက အသက်ဘယ်လောက်ကြီးကြီး အချစ်နဲ့တွေ့ရင် ငယ်ရွယ်နုပျိုသွားကြတယ်။ အဟိ….. ဒီတော့ မင်းသမီးကို ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါ့မယ်။
ဇာတ်လမ်းက အဆိုးကြီးမဟုတ်ပင်မဲ့ မင်းသား Jung Dong Gun သာမဟုတ်ရင်တော့ မဗေဒါအတွက် အတော်ကိုပျင်းစရာကောင်းတဲ့ကားဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ ပြီးတော့ ကားနာမည်ကိုက gentleman’s Dignity ဆိုတော့လဲ ယောကျာင်္းသားများကို ဦးစားပေးရိုက်ထားတာပေါ့နော်။ မင်းသားဇာတ်ကောင်က မင်းသမီးကိုသာတဖက်သက်ကြိုက်တာ သူကလဲ အကြောကြီးဆက်ဆံတာနော်။ သူတို့ ၂ယောက်ကြိုက်ခါနီးမှာ သူကပဲ မင်းသမီးကို ကောက်ပြီး မခေါ်တာ မင်းသမီးက ပြန်လိုက်ရတယ်။ JDG မို့လို့ ခွင့်လွှတ်နိုင်တာ ဟွန်း။
ဒါပေမဲ့ အပိုင်း ၁ပိုင်းစတိုင်းမှာ သူတို့ သူငယ်ချင်း ၄ယောက်ငယ်ငယ်တုန်းက အကြောင်းတွေကို ဟာသနှောပြီး ပြတဲ့ စတိုင်သစ်လေးကိုတော့ သဘောကျပါတယ်။ ဒီကားကို မဗေဒါက ၅မှတ်မှာ ၄မှတ်ပေးတာကတော့။ ၁မှတ်ကို ဇာတ်လမ်းအတွက်နှုတ်တယ်။ ၃မှတ်က Jung Dong Gun အတွက် ၁မှတ်က ကျန်တဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့။ အဟိ….
ဒီကားအတွက် ဒီကားပြတဲ့ SBS တီဗွီ Station ကပေးတာမဟုတ်ပဲ တခြားကရတဲ့ ဆုတွေကတော့...
Best OST: "My Love" (A Gentleman's Dignity OST Part 5) by Lee Jong Hyun
ဒီ Drama Review နဲ့ Rating တွေက မဗေဒါရဲ့ အကြိုက်ပေါ်လိုက်ပြီးပေးထားတဲ့အတွက် စာဖတ်သူတွေနဲ့ အမြင်ချင်းတူချင်မှတူမယ်။ မတူဘူးဆိုရင်လဲ စာဖတ်သူတွေရဲ့ အကြိုက်ကို ကွန်မန့်မှာ ဆွေးနွေးသွားနိုင်တယ်နော်….
Posted by mabaydar at 5:37 PM 12 comments :
2012 Best Korean Drama Lists - Part 1 (Base on my liking)
ကိုယ့်ဘလော့ကို သတိထားမိသလောက် ဇာတ်လမ်းတွဲတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မရေးဖြစ်ခဲ့တာ အတော်ကြာပြီပဲ... ၁နှစ်လောက်တောင်ရှိမယ်ထင်ပါတယ်... အကြောင်းရှာတော့ ၃ ချက်တွေ့တယ်.... ၁။ အစပိုင်းကြိုက်ပေမဲ့ အဆုံးပိုင်းခြာလို့ မရေးဖြစ်ခြင်း ၂။ သိပ်ကြိုက်လွန်းလို့ကားအဆုံးထိပြီးမှ ရေးမယ်စိတ်ကူးပြီး ကားပြီးသွားတော့ နောက်တစ်ကားဆက်ကြည့်ဖြစ်ခြင်း ၃။ Drama Review တစ်ခါတစ်ခါရေးလျှင် စိတ်ရော၊လူရော၊အချိန်ရော ပင်ပန်းကုန်လွန်လွယ်သောကြောင့် ပျင်းခြင်း(မိမိကိုယ်ကို အပစ်တင်ခြင်း) (ပိုစ့်အရှည်ကြီးတွေရေးရသလောက် စာဖတ်သူဘယ်လောက်များများက ကိုယ့်ပိုစ့်ကိုကြိုက်လဲ မသိရခြင်း (အဲဒါ သူများအပစ်ဖို့တာ :P ))တို့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်... နောက်ပြီး ကိုယ်ကြည့်ပြီးတဲ့ Episode တစ်ခုစီရဲ့ ခံစားချက်ကို Facebook page မှာ ရေးဖြစ်တော့ ပိုစ့်တစ်ပုဒ်အနေနဲ့ ထွက်မလာတော့ပါဘူး... အခုတော့ ဒီပိုစ့်ထဲမှာ ၂၀၁၂ (ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်) တုန်းက မဗေဒါကြည့်ဖြစ်သမျှ Korean Dramas list ကို Category ၄ခုခွဲပြီးရေးဖို့စိတ်ကူးတယ်...
၁။ Good Dramas (Dramas Fan မှန်ရင် ကြည့်သင့်တယ်... ဒါဗြဲ)
၂။ Just So So Dramas (ပျင်းနေတယ်၊ ကြည့်စရာတစ်ခြားကားလဲ မရှိဘူးဆိုရင်တော့ ဒီလိုကားမျိုးလေးတွေနဲ့ အချိန်ဖြုန်းရတာလဲ မဆိုးဘူး...)
၃။ Bad (မကောင်းလို့ဖြစ်စေ) or I am not interested to watch them (တွေ့ကတည်းက မကြည့်ချင်လို့ ဖြစ်စေ) or I couldn't able to finish for some reasons (အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အဆုံးမသတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်စေ) Dramas (My reasons will be stated)
၄။ Waiting List Dramas
စာဖတ်သူတို့အနေနဲ့ အထူးသိထားရမှာက ခုပြောမဲ့ကားတွေက မဗေဒါ အကြိုက်ပေါ်မူတည်ပြီးပဲရေးတာဖြစ်ပြီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အကြိုက်ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်... တကယ်လို့အကြိုက်ကွဲပြားခဲ့တယ်ဆိုရင်လဲ ကွန်မန့်လေးမှာ ၀င်ရောက်ပြီး ကိုယ့်အကြိုက်အကြောင်းကို အားရပါးရ ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်... (တမင်ကွန်မန့်ရေးအောင် ပြောတာ... ဒီဂွင်မိုက်တယ် အဟိ)
၂၀၁၂ မှာ မဗေဒါကြိုက်တဲ့ Good Dramas ၆ ကားရှိပါတယ်... တစ်ကားခြင်းစီကိုရေးပါမယ်... (ပိုစ့်ကရှည်ပြီး မတက်လာမှာစိုးလို့ Good Dramas ကို ၃ကားစီ ၂ပိုင်းခွဲတင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်)
So Ji Sub as Kim Woo Hyun/ Park Ki Young
ဒီဇာတ်လမ်းလေးကတော့ Cyber Investigation အဖွဲ့ကို အခြေခံပြီးရိုက်ထားတဲ့ မှုခင်းဆန်တဲ့ကားလေးပါ... ကင်ဝူဟွန်းရဲ့ အဖေဟာ အရာရှိကြီးကြီးပိုင်းတစ်ယောက်ပါ... ကင်ဝူဟွန်းကိုယ်တိုင်လဲ ရဲသင်တန်းကို ပထမဆုံးအဆင့်ကနေအောင်မြင်ခဲ့ပြီး Cyber Investigation အဖွဲ့ကိုဝင်ခဲ့ပါတယ်... သူနဲ့ ရဲသင်တန်းအတူတူတက်ခဲ့တဲ့ အခင်ဆုံးအခန်းဖော်သူငယ်ချင်း Park Ki Young ကတော့ ဘာအကြောင်းပြချက်မှမပေးပဲ ရုတ်တရက်ကြီး ရဲသင်တန်းကို တ၀က်တပျက်မှာထွက်ခဲ့ပါတယ်... ကင်ဝူယွန်း လုပ်ငန်းခွင်ဝင်အပြီးမှာ Hadaz လို့ခေါ်တဲ့ Hacker တစ်ယောက်ကို အသေအကြေလိုက်လံစုံစမ်းခဲ့သော်လည်း ဖမ်းမမိခဲ့ပါဘူး... ထိုအချိန်မှာပဲ ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတစ်ယောက်တိုက်ပေါ်မှ ခုန်ချသေဆုံးမှုကို စတင်စုံစမ်းရပါတယ်... သို့သော် ထိုမင်းသမီးသေဆုံးမှုမှာ သွေးရိုးသားရိုး suicide မဟုတ်ပဲ လုပ်ကြံမှုဖြစ်နေပါတယ်... ထိုမင်းသမီးကို တွန်းချတဲ့သူရှိတယ်ဆိုတာ မင်းသမီးမသေခင် ဖွင့်ထားတဲ့ ကွန်ပြူတာ webcam ကနေ Hadaz က မြင်လိုက်တဲ့အတွက် ဒီ file ကို လူသိရှင်ကြား Bill board မှာ ဖြန့်ကျက်ခဲ့ပါတယ်... Kim Woo Hyun ဟာ Hadaz နောက်ကိုလိုက်ရင်း သူနဲ့ကွဲကွာခွဲတဲ့ သူငယ်ချင်း ပါ့ကီယောင်းမှန်းသိရှိခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့ သူတို့ သူငယ်ချင်း ၂ယောက်လုံးကို ဗုံးခွဲလုပ်ကြံခံရပါတယ်... ဗုံးအတွင်းမှာ ကင်ဝူးယွန်းဟာ ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားပြီး... ပါ့ကီးယောင်းဟာ မမှတ်မိနိုင်လောက်အောင် ပုံပျက်ခဲ့သော်လည်း သူ့ရဲ့ အကျီင်္မှာ ကင်ဝူဟွန်းရဲ့ ID ကိုတွေ့တာကြောင့် ကင်ဝူဟွန်းအမှတ်နဲ့ ဆေးရုံခေါ်ပြီး Plastic Surgery လုပ်ခဲ့ပါတယ်... ပါ့ကီယောင်းကို Cyber Investigation team က Yoo Kang Mi ဆိုတဲ့ ရဲမေက အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကူညီခဲ့ပါတယ်... အဲဒိနောက်မှာ လူသတ်မှုတွေအဆက်မပြတ်ဖြစ်ခဲ့တာတွေကို အတူတူစုံစမ်းရင်း ကင်ဝူဟွန်းကိုရော မင်းသမီးကိုရောသတ်တဲ့ တရားခံကို ဖော်ထုတ်ကြပါတယ်... Park Ki Young ဟာ ကင်ဝူဟွန်းအဖြစ်နဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ကို ဘယ်လောက်ကြာကြာလိမ်နိုင်မလဲ၊ သူ့အတွက် ရဲအဖွဲ့ထဲမှာ ပြိုင်ဘက်တွေ၊ သလျှိုတွေကိုဘယ်လိုခွဲခြားသိမလဲ... ကင်ဝူဟွန်းရဲ့ သူမသိတဲ့အကြောင်းတွေကဘာလဲ... စသည်ဖြင့် စိတ်ဝင်စားစရာဇာတ်လမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်...
ဒီဇာတ်ကားကို အစက ဒီလောက်စိတ်မ၀င်စားခဲ့ပါဘူး... မှုခင်းကားဆို ဂျပန်ကားကိုကြည့်ဖြစ်တာများပါတယ်... ဒါပေမဲ့ အစပိုင်း ၁၅မိနစ်လောက်ကို ကြည့်ရင်း ကျော်သွားပြီဆိုရင်တော့ ရပ်လို့ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး... တစ်ပိုင်းပြီးတိုင်း ပြီးတိုင်းမှာ နောက်တစ်ပိုင်းကို ဆက်ကြည့်ချင်အောင် အပိုင်းတိုင်းစွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်... ပြီးတော့ ဒီခေတ်ကြီးမှာ လူတစ်ယောက်အကြောင်းသိဖို့... အားနည်းချက်ကိုရှာဖို့ ပါစင်နယ်ကွန်ပြူတာတစ်ခုကနေ ဘယ်လောက်လွယ်လွယ်ကူကူရနိုင်သလဲဆိုတာကလဲ သတိပြုစရာတစ်ခုပါပဲ... အဓိက လူသတ်ကောင်ကိုရှာရင်း ကြားကဖြစ်ပျက်တဲ့ တခြားအမှုလေးတွေကလဲ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်... မဗေဒါက ရုပ်ရှင်ထဲမှာ တစ်ခုခုပြောလို့ ကိုယ်သိပ်နားမလည်ရင် Google ပြီးရှာတတ်တဲ့ အကျင့်ရှိတော့ ကွန်ပြူတာ Hacking နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ Virus တို့ဘာတို့ ရုပ်ရှင်ထဲက စာရေးစရာများ ဖောသလားလို့ ရိုက်ရှာကြည့်တတ်ပါတယ်... အားလုံးကဖြစ်နိုင်ပါတယ်... ဒီကားမှာ အချစ်ဇာတ်လမ်းက ပါတယ်ဆိုရုံလောက်လေးဆိုပေမဲ့ မင်းသားနဲ့ မင်းသမီးကြားမှာ လိုက်ဖက်မှုတွေရှိပါတယ်... သရုပ်ဆောင်တွေထဲမှာ မဗေဒါချီးကျူးချင်တဲ့သူကတော့ မင်းသားကို အမြဲသံသယ၀င်နေတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့က MAD COW ဆိုတဲ့ ခပ်၀၀နဲ့လူပါပဲ... ဒီလူလဲ သူ့ဇာတ်ကောင်ကို ပိုင်နိုင်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး မဟုတ်မခံ ဒေါသကြီး ရှူးရှူးရှဲရှဲလုပ်တတ်တဲ့ ဇာတ်ကောင်နဲ့ လိုက်ဖက်ပါတယ်... သူရော မင်းသားရောက လူဆိုးကိုရှာနေကြပြီး သူက မင်းသားကိုလုံးဝမယုံတော့ အသည်းယားစရာတွေကြားမှာအများကြီးဖြစ်ပျက်တဲ့အတွက် ဇာတ်လမ်းက ဇာတ်ရှိန်ကျသွားတယ်မရှိပါဘူး... ဒီကားက မှုခင်းကားဆိုတော့ Romantic comedy ကြိုက်တဲ့သူတွေက ကြည့်ချင်စိတ်ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး... ဒါပေမဲ့ ကြည့်ကြည့်ပါလို့တိုက်တွန်းပါရစေ... So Ji Sub ကို အရင်က ဒီလောက်မကြိုက်ခဲ့ပါဘူး... ဒီကားထဲမှာတော့ အတော်လေးကြိုက်ပါတယ်... သူနဲ့ တစ်ချိန်ထဲပြနေတဲ့ကားတွေထဲမှာ Ghost ကို မဗေဒါ အမျှော်လင့်ခဲ့ရဆုံးပေါ့...
ခုပဲ Ghost ကားအကြောင်းရှာရင် ကျွန်မပြောတဲ့ အဲဒိကားထဲက ခပ်၀၀နဲ့လူကြီးဟာ ဒီကားနဲ့ ၂၀၁၂ Korean Drama Award မှာ Excellent Actor ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်... အဲဒါကြောင့်မဗေဒါပြောချင်တာက ဒီခေတ်မှာ သရုပ်ဆောင်ဖြစ်ဖို့ ရုပ်ရည်ကအဓိကကျတယ်ဆိုပေမဲ့ တကယ်တမ်းအရည်အချင်းရှိတဲ့သူတွေအတွက်တော့ ဘယ်လိုပဲနေနေထင်ပေါ်ပြီး ပရိတ်သတ်က သတိထားမိတာပါပဲ... ဒီခေတ်ပရိတ်သတ်တွေက အရင်ကထက် ပိုပြီးတော်လာကြပါပြီ...
2012 SBS Drama Awards: Top Excellence Award for Drama Special, Actor (So Ji Sub)
2012 SBS Drama Awards: Special Acting Award for Drama Special, Actor (Kwak Do Won)
2012 SBS Drama Awards: Top 10 Stars Award (So Ji Sub)
2012 5th Korea Drama Awards: Excellence Actor Award (Kwak Do Won)
၂။ Nice Guy
Genre: Classic Melodrama
ဒီဇာတ်လမ်းလေးကတော့ တကယ်ကို Classic Melodrama Theme လို့ပြောရပါမယ်... သစ္စာဖောက်မှု၊ ကလဲစားချေလိုမှု၊ စီးပွားရေး၊ အမုန်း၊ ရန်ညိုး တွေကြားမှာ ပေါက်ဖွားလာတဲ့ ခါးသက်သက် အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးလို့ ပုံဖော်ချင်ပါတယ်... Kang Ma Roo ဆိုတဲ့ ဆင်းရဲပင်မဲ့ ထူးချွန်တဲ့ ဆေးကျောင်းသားလေးဟာ သူချစ်တဲ့ မိန်းမ Han Jae Hee အပြစ်တွေကို ခေါင်းခံရင်း ထောင်နန်းစံခဲ့ပင်မဲ့ သူပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ ထိုအမျိုးသမီးရဲ့ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန် သစ္စာဖောက်မှုတွေနဲ့သာတွေ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်... နဂိုကတည်းက အရည်အချင်းရှိတဲ့ Kan Ma Roo ရဲ့ ဘ၀လမ်းဖျက်ဆီးခံခဲ့ရလို့ အပြစ်မယူချင်ပေမဲ့ ထပ်ကာတလဲလဲ နှောင့်ယှက်စော်ကားမှုတွေက သူ့ရဲ့ မာနနဲ့ ဒေါသကို မီးမွှေးပေးခဲ့ပြီး လက်စားချေမှုကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်... သူလက်စားချေဖို့အတွက် Han Jae Hee လက်ထပ်ခဲ့တဲ့ သူဋ္ဌေးကြီးရဲ့ လင်ပါသမီး မာနကြီးတဲ့ သူဋ္ဌေးသမီး Sun Eun Gi ကို ချဉ်းကပ်ပြီး သူမအချစ်ကို ရအောင်ယူခဲ့တယ်... ဒါပေမဲ့ Sun Eun Gi ကို သူပိုနီးစပ်ပြီး သိလာတာနဲ့အမျှ သူအရင်ကထင်ခဲ့တဲ့ မာနကြီး မောက်မာတဲ့ သူဋ္ဌေးသမီးထက် အထီးကျန်ပြီး မိထွေးမိန်းမလည်ရဲ့ လက်ဝါးကြီးအုပ်လိုမှုကိုခံနေရတဲ့ မိန်းကလေးမှန်းသူပိုသိလာတယ်... Sun Eun Gi က Kang Ma Ru ကို အချစ်စစ်နဲ့ ချစ်တဲ့အတွက် နောက်ဆုံး Kang Ma Ru က သူ့ကလဲစားချေတဲ့ လှည့်ကွက်ထဲ Eun Gi ကို မပါစေချင်တော့ပဲ ရက်စက်ကြမ်းတန်းတဲ့စကားတွေနဲ့ လမ်းခွဲဖို့ကြိုးစားတယ်... ဒီအချိန်မှာ စိတ်ထက်တဲ့ Sun Eun Gi က သူသေကိုယ်သေ ကားနဲ့ယှဉ်တိုက်ခဲ့ပြီး သူမကိုယ်တိုင် အတိတ်မေ့ဝေတနာကို ခံစားခဲ့ရတယ်... သူမနေမကောင်းဖြစ်နေစဉ်အတွင်း သူမမိဘပိုင် ကုမ္ဗဏီကို အပိုင်စီးချင်တဲ့ သူမရဲ့ မိထွေး Kang Ma Ru ရဲ့ ချစ်သူဟောင်းကို သူတို့ ၂ယောက် ဘယ်လိုတိုက်ကြမလဲ။ ဒေါသ၊ မာန၊ လောဘ၊ သံသယ၊ အထင်လွဲမှု စက်ဝန်းတွေကြားမှာ ခါးသက်သက်အချစ်တစ်ခွက်ကို Kang Ma Ru နဲ့ Sun Eun Gi ဘယ်လိုကျော်ဖြတ်မလဲ။ သူမသိပ်မုန်းတဲ့ မိထွေးနဲ့ ပတ်သတ်ခဲ့တဲ့ သူမသိပ်ချစ်ရတဲ့ Kang Ma Ru ကို ရော Sun Eun Gi ခွင့်လွှတ်နိုင်ပါ့မလား... တစ်ဘ၀လုံးကံဆိုးတဲ့ Kang Ma Ru တစ်ယောက် အဆုံးမှာရော ပျော်ရွှင်ခွင့်ရပါ့မလား.... တစ်ဆင့်ချင်းစီကို ဒီဇာတ်လမ်းကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်ရင်း အချစ်၊ အကြမ်း၊ အလွမ်းရသစုံကို Ma Ru ရယ် Eun Gi ရယ်နဲ့အတူ ခံစားကြည့်ကြနော်...
ဒီကားဇာတ်လမ်းကို စသိရတုန်းက မင်းသား Song Joong Ki လို Baby Face flower boy မျက်နှာမျိုးနဲ့ လိုက်ပါ့မလားလို့ စိုးရိမ်ခဲ့တယ်... သူ့ကို အပြင်မှာတွေ့ဖူးတော့ အားပေးချင်စိတ်တော့ဖြစ်မိပါတယ်... မင်းသမီး ၂ယောက်လုံးက ကိုယ်သိပ်မကြိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်နေတယ်... ဒါပေမဲ့ Sun Eun Gi နေရာက သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ခေါင်းဆောင်မင်းသမီး Moon Chae Won ရဲ့ သရုပ်ဆောင်အားက အတော်ကောင်းလို့ ကြည့်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ အရမ်းသဘောကျခဲ့တယ်... မင်းသားရော မင်းသမီးရော ထင်မထားလောက်အောင် အရမ်းသရုပ်ဆောင်ကောင်းတယ်... မင်းသားကလဲ သူ့မျက်နှာ နုနုလေးကို မေ့သွားလောက်အောင် စိတ်ဓာတ်မာတဲ့ ယောကျာင်္းတစ်ယောက်အနေနဲ့ Cool Character ကို ပိုင်နိုင်အောင်သရုပ်ဆောင်နိုင်တယ်... မင်းသမီးက စစချင်းမှာ မောက်မာပြီး ကြွပ်ဆပ်ဆပ်ပုံစံမျိုးလဲ သရုပ်ဆောင်နိုင်သလို၊ အတိတ်မေ့သွားပြီး နုညံ့တဲ့ ပုံစံမျိုးသရုပ်ဆောင်တော့လဲ ဂရုဏာသက်မိတယ်... သူတို့ ၂ယောက်အတွက် မျက်ရည်တွေဖြိုင်ဖြိုင်ကျခဲ့ရတဲ့ကားပေါ့... အဆုံးသက်မှာ အလွမ်းနဲ့ပဲ အဆုံးသက်တော့မယ်လို့ မှန်းခဲ့တယ်... အဲလိုအဆုံးသက်ခြင်းကပဲ ဇာတ်လမ်းရဲ့ အတိမ်အနက်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ စိတ်ကို ပြင်ဆင်ခဲ့တယ်... မင်းသား (သို့) မင်းသမီး သေလိမ့်မယ်လို့ ထင်ထားခဲ့တယ်... သူတို့ ၁ယောက်ယောက်ကို မသေပဲ ဇွတ်ပေးစားရင် ဇာတ်သိမ်းပေါ့ပျက်ပျက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့ပင်မဲ့ ပျော်စရာဇာတ်သိမ်းကို ဇာတ်လမ်းပေါ့ပျက်ပျက်မဖြစ်ပဲ လှလှလေးသိမ်းပေးသွားတဲ့ စာရေးစရာကို သိပ်ကျေးဇူးတင်မိတယ်... ကိုယ်တောင် မတွေးမိခဲ့ဘူး... နောက်ပြီး ဒေါသတွေ လောဘတွေနဲ့ ဘယ်လောက်ပဲ ကလဲစားချေဖို့ ကြိုးစားကြိုးစား အတုံ့အလှည့်တွေနဲ့ မပြီးဆုံးနိုင်တဲ့ ရန်ပွဲကြီးကို Kang Ma Ru တစ်ယောက် အချစ်မေတ္တာနဲ့ ဖြေရှင်းလိုက်မှပဲ အားလုံးဟာ တကယ်ပြီးဆုံးခဲ့တယ်... အဆုံးပိုင်းနားမှာ သူ့ကိုသစ္စာဖောက်ခဲ့တဲ့ Han Jae Hee ကို ပြောတဲ့ Dialogue တွေကို အရမ်းသဘောကျတယ်... သူ့စကားတွေက နုညံ့တယ်၊ ဂရုဏာမျက်လုံးတွေနဲ့ ဒီမိန်းမကို သူသနားတယ်၊ ဒီမိန်းမရဲ့ အပြစ်ကို ခေါင်းခံပြီး ထောင်ထဲဝင်ခဲ့တာဟာ ဒီမိန်းမအတွက် အမှန်၊အမှားကို ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည်မရှိအောင်လုပ်ခဲ့သလိုဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် သူ့ကိုယ်သူပဲ အပြစ်တင်ပါတော့တယ်လို့ပြောတဲ့စကားက တဖက်က သူ့အပေါ်အမြဲကောက်ကျစ်ခဲ့တဲ့ မိန်းမကို ခြုံးပွဲချငိုလောက်တဲ့ စကားပဲ... အဲဒိအတွက် ကျွန်တော် မမကို လက်ထပ်ပါ့မယ်... ကျွန်တော့အချစ်ကို မပေးနိုင်တော့ပင်မဲ့ မမသာ မကောင်းတာတွေမလုပ်တော့ဘူးဆိုရင် ကျွန်တော် တင့်တောင်းတင့်တယ်ထားနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ့မယ်ဆိုတဲ့စကားကလဲ တဖက်မိန်းမကို ဘယ်လောက်ဖီးငုတ်စေလဲ... နင့်ကိုတော့ မချစ်နိုင်တော့ဘူး.. ဒါပေမဲ့ ငါချစ်တဲ့ မိန်းကလေးကို နင်ဆက်မနှောင့်ယှက်တော့အောင် ငါခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပဲ စတေးတော့မယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်က ဘယ်လောက် အောက်မလဲ စဉ်းစားကြည့်... သူ့ကို အသေရရ အရှင်ရရ ယူချင်တဲ့ မိန်းမတောင် နောက်ဆုံးမှာ သူ့အမှားတွေကို ၀န်ခံပြီး နောက်ဆုံတ်သွားခဲ့တယ် မေတ္တာနဲ့ ဖြေရှင်းခြင်းဟာ အကောင်းဆုံးပဲလို့ သင်ခန်းစာပေးသလိုပဲခံစားရတယ်... အချစ်စစ်မှန်ရင် ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် ပြန်ချစ်တယ်၊ မေ့မသွားဘူးဆိုတာကိုလဲ ဇာတ်သိမ်းလှလှလေးနဲ့ သရုပ်ဖော်သွားတယ်... ပြောရင် Spoiler ဖြစ်မှာစိုးလို့ ဒီလောက်ပဲပြောတော့မယ်... ဒီဇာတ်လမ်းကို ကြည့်ပြီးတဲ့သူတွေကတော့ ဇာတ်သိမ်းလေးက ဘယ်လိုခံစားမှုမျိုးပေးလဲ ဘယ်လိုသဘောပေါက်လဲဆိုတာ ကွန်မန့်မှာပြောသွားတာကို မဗေဒါသိချင်ပါတယ်... ဘာပဲပြောပြော ဒီဇာတ်ကားနဲ့ Song Joong Ki ရဲ့ သရုပ်ဆောင်အားကို သိနိုင်သလို... မင်းသမီး Moon Chae Won ရဲ့နောက်ထွက်မဲ့ဇာတ်ကားတွေကိုလဲ မဗေဒါစောင့်ကြည့်ဖြစ်တော့မှာပါ...
ကိုရီးယားကားတွေ ဘာဆုတွေရလဲ ကြည့်တဲ့နေရာမှာ မဗေဒါအနေနဲ့ သူတို့ကားပြတဲ့ TV station ကပေးတဲ့ဆုထက် တကယ့် နိုင်ငံအစည်းအရုံးတစ်ခုခုပဲဖြစ်စေ... ရုပ်ရှင် အစည်းရုံးတစ်ခုလုံးကဖြစ်စေပေးတဲ့ဆုက ပိုပြီး ဂုဏ်ယူဖို့ကောင်းတယ်လို့ မဗေဒါထင်တာပဲ... Nice Guy အတွက်ဆုတွေကတော့....
၃။ Bridal Mask (aka) Gaksital
ကိုရီးယားကို ဂျပန် ကိုလိုနီအုပ်စိုးတဲ့ခေတ်မှာ လီခန်ဆန်းနဲ့ လီခန်တိုဆိုတဲ့ ညီအစ်ကို၂ယောက်ရှိတယ်... အငယ်ကောင် "လီခန်တို" က "ဆတိုး ဟီရိုရှိ" အမည်နဲ့ ဂျပန်ရဲစခန်းမှာ ရဲလုပ်ပြီး ဂျပန်အကြိုက်နေတယ်... သူ့အစ်ကို လီခန်ဆန်းက သာမာန်အချိန်မှာဆို ဦးနှောက်မကောင်းတဲ့သူတစ်ယောက်လို့ အားလုံးကသိထားပင်မဲ့ မတရားမှုတွေရှိလာရင် တိုက်ဖျက်ပေးတဲ့ မျက်နှာဖုံးစွပ် သူရဲကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်... သူ့ကို "Gaksital" လို့ခေါ်ကြတယ်... Gaksital ကို သူ့အစ်ကိုမှန်းမသိပဲ သဲကြီးမဲကြီးဖမ်းဖို့ လိုက်ရှာနေတဲ့ လီခန်တိုတစ်ယောက် သူ့အစ်ကိုကို Gaksital လို့ သိလိုက်တဲ့အချိန်မှာ သိပ်နောက်ကျသွားပြီ... ဂျပန်တွေရဲ့ သေနတ်ဒဏ်ရာကြောင့် အစ်ကိုရော အမေပါ သူ့လက်ထဲမှာသေဆုံးသွားခဲ့တယ်... အဲဒိအချိန်မှာပဲ လီခန်တိုဟာ သာမာန်အချိန်မှာ လူအများမုန်းတဲ့ ဂျပန်ရဲစခန်းမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ ရဲဖြစ်ပြီး... မတရားမှုတွေဖြစ်လာချိန်မှာ Gaksital မသေသေးဘူးဆိုပြီး ဂျပန်တွေကိုလှည့်စားကာ ပြည်သူတွေချစ်တဲ့ ပြည်သူဘက်ကရပ်တည်တဲ့ သူရဲကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်... လီခန်တိုရဲ့ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း ကီမူရာ ရွှန်းဂျီဆိုတဲ့ ဂျပန်ဟာ သူ့အဖေရဲ့သဘောထားကိုတောင်ဆန့်ကျင်ပြီး ကိုရီးယားကလေးတွေကို စာသင်ပေးတဲ့ ဆရာအဖြစ်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ သဘောကောင်းမနောကောင်း လူတစ်ယောက်ပါ... သူဟာ တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့သမီး၊ သူမကိုယ်တိုင်လဲ တော်လှန်ရေးထဲပါဝင်လှုပ်ရှားတဲ့ မုတ်ဒန်း ဆိုတဲ့ ကိုရီးယားမလေးကို မြင်မြင်ချင်းချစ်မိသူပေါ့... ဒါပေမဲ့ မုတ်ဒန်းဆိုတဲ့ ကောင်မလေးက သူသိပ်မုန်းတဲ့၊ သူ့အစ်ကိုကို သူ့မျက်စိရှေ့မှာတင်သတ်သွားတဲ့ Gaksital ဆိုသူကို ချစ်နေလေရဲ့... အကြောင်းကြောင်းကြောင့်၊ အထူးသဖြင့် အချစ်ကြောင့် အမှောင်ကမ္ဘာကိုပြောင်းသွားတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်...
ဒီကားကို Airing လုပ်တဲ့အချိန်က အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ Ghost နဲ့ တစ်ချိန်တည်းပါပဲ... ပြတဲ့ TV channel ပဲ မတူတာပါ... ဒီကားဟာ စပြတကည်းက အဆုံးအထိ Viewer Rating ထိပ်ဆုံးပိုင်းမှာရှိပါတယ်... Ghost ကတော့ သူ့နောက်က မကွာဘူးဆိုယုံလောက်ရှိပါတယ်... ဒါပေမဲ့ တချို့ အပိုင်းတွေမှာတော့ Ghost က rating ပိုကောင်းတယ်လို့သိရပါတယ်... ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီကားရဲ့ အပိုင်းတိုင်းက Rating digit ၂လုံးအောက်ကျသွားတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး... ဒါဆိုဘာဖြစ်လို့ မဗေဒါက အမှတ်ပြည့်မပေးပဲ ၀.၂ လျော့ထားရသလဲဆိုရင်တော့ဖြင့် မင်းသမီးမကောင်းလို့လို့ပဲပြောရမှာပါ... ဇာတ်လမ်းက မင်းသားအဓိကကျနေပေမဲ့ မင်းသမီးသရုပ်ဆောင်အားက နောက်ကသိပ်မလိုက်နိုင်ဘူး... လုံးလုံးမကောင်းဘူးပြောတာမဟုတ်ပါဘူး... ဒီထက်ကောင်းအောင် သရုပ်ဆောင်လို့ရသေးတာကိုပြောတာ... မင်းသား Joo Won ကို Baker King မှာတုန်းက မကြည့်ဖြစ်လိုက်ပင်မဲ့ (Baker King က နာမည်ကြီးကားဆိုပင်မဲ့ အဲလိုဇာတ်လမ်းမျိုးကို မဗေဒါက မုန်းလို့မကြည့်တာပါ)... Bridal Mask (aka) Gaksital ကားမှာတော့ အ၀တ်အစားဝတ်တာ အရမ်းစမတ်ကျပြီး မိုက်ကန်းကန်းပြောင်စပ်စပ် (ဘယ်လိုပြောရမှန်းတောင်မသိဘူး) အဲဒိလို သရုပ်ဆောင်ကောင်းလို့ စွဲညိသွားပါတယ်... ပထမမင်းသမီးထက်စာရင် ဒုတိယမင်းသမီး ဂျပန်ဂိုဏ်းရဲ့ မွေးစားသမီး အစပိုင်းက လူဆိုးမလုပ်ရတဲ့ မင်းသမီး Han Chae Ah ကမှ ပိုသရုပ်ဆောင်ကောင်းပါသေးတယ်... ဒီကားမှာ မင်းသားနဲ့အပြိုင် သရုပ်ဆောင်အားကောင်းတာကတော့ ဒုတိယမင်းသား Kimura Shunji အဖြစ်သရုပ်ဆောင်တဲ့ Park Ki Woong ပါ... သူ့ကို တခြားကားတော်တော်များများမှာ ဇာတ်ပို့အနေနဲ့ တွေ့ဖူးပါတယ်... ဒီကားကတော့ သူရဲ့ ပထမဆုံး ဒုတိယမင်းသားအနေနဲ့ပါတဲ့ကားပါ... သူတို့ရိုက်ကွင်းပေါ်ကပုံတွေကို မဗေဒါရဲ့ facebook ပေ့ခ်ျပေါ်မှာ တင်ထားပါတယ်... ဇာတ်လမ်းအရလဲ အပိုင်း ၂၈ပိုင်းဆိုပေမဲ့ အရမ်းစွဲပြတယ်လို့ မထင်ပါဘူး... တချို့အပိုင်းလေး နည်းနည်းလောက်ပဲ ခဏပျင်းတာဖြစ်ပါတယ်... နောက်ဆုံးခန်းမှာ အနည်းငယ်အဆွေးနဲ့ ဇာတ်သိမ်းပင်မဲ့ သူရဲကောင်းဆိုတာ သံယောဇဉ်တွေနဲ့ ရှုပ်မနေတာပဲကောင်းပါတယ်... (အဟိ.. မင်းသမီးမကြိုက်တော့ ဒီလိုပဲ)... ခုမှစဉ်းစားကြည့်တော့ နောက်ဆုံးခန်းလေးက နည်းနည်းပေါ့ပျက်ပျက်ဆန်တယ်လို့ ခံစားရတယ်... မြန်မာကားအထာလိုဖြစ်သွားတယ်... အဲဒါကြောင့် အမှတ်နည်းနည်းလျော့သွားတာ... ဒါပေမဲ့ overall ဆိုရင်တော့ အချိန်ပေးကြည့်သင့်တဲ့ ဆက်ပြီးရင်း ဆက်ချင်နေတဲ့ ကားလေးတစ်ကားပါပဲ...
Bridal Mask (aka) Gaksital အတွက်ရခဲ့တဲ့ ဆုတွေကတော့....
2013 13th Republic of Korea National Assembly Awards
Excellence Award for Serial Drama, Actor (Joo Won)
Supporting Actor Award (Park Ki Woong)
Newcomer Actress Award (Jin Se Yun)
Popularity Award (Joo Won)
Drama Excellence Actor (Kim Eung Soo)
Drama Excellence Actor (Jun Noh Min)
Drama Newcomer Award (Ban Min Jung)
ဆက်ရေးနေရင် အကြာကြီးစောင့်နေရမှာစိုးတာနဲ့ ဒီသုံးကားအရင်တင်လိုက်ပါတယ်.... ရေးပြီဟေ့ဆိုရင်လဲ ဇာတ်လမ်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ပြောချင်တာမှန်သမျှရေးမိတော့ ပိုစ့်တွေက ရှည်ပြီး ရေးရတဲ့သူလဲ ပင်ပန်း ပေးရတဲ့အချိန်လဲများပါတယ်... ဇာတ်ကားတွေက မနှစ်က ကားတွေဆိုတော့ လူက အသေးစိတ်ကို ခပ်မေ့မေ့ဖြစ်နေတော့ ပြန်ပြီးရှာရဖွေရ ဖတ်ရတာကလဲ အချိန်ပေးရသေးပါတယ်... ဖေ့ဘွတ်ပေ့ခ်ျမှာ Like 20 ပြည့်ရင် ကား ၂၀ ရေးမယ်လို့ပြောလိုက်တော့ တကယ်ပဲ လာ Like ကြတဲ့ ကိုရီးယား Drama ချစ်သူငယ်ချင်း စာဖတ်သူတွေတာဝန်ကျေခဲ့သလို မဗေဒါလဲ ရေးပါ့မယ်... စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုကြပါနော်...
Posted by mabaydar at 4:31 PM 12 comments :
2012 Best Korean Drama Lists - Part2(Based on my...
2012 Best Korean Drama Lists - Part 1 (Base on my ...